Odina oo ugu baaqay Mudavadi in uu banneeyo kursigiisa barlamaanka - Sabahionline.com
Odina oo ugu baaqay Mudavadi in uu banneeyo kursigiisa barlamaanka
Ra’iisul-wasaaraha Kenya Raila Odinga ayaa aqbalay istaqaalada uu Musali Mudavadi ka keenay Xisbiga Dhaq-dhaqaaqa Dimuqraadiyadda ee (ODM), isaga oo intaa ku daray in uu sidoo kale isaga dago kursiga uu ku leeyahay barlamaanka, idaacadda Capital FM News ayaa warisay.
Komishanka doorashooyinka Kenya oo ansixiyay 8 musharrax oo u taagan madaxweynenimada
Mudavadi oo heshiis la saxiixday Isbahaysiga Jubilee
Mudavadi oo beddeshay xisbigii kuna dhawaaqay in uu u taagan yahay madaxweynenimo
Kibaki oo waqti ku daray maalinta ugu dambaysa ee xisbi badelashada xildhibaanada Kenya
“Haddii aad tahay kan isagu ka tegaya xisbiga, markaa waa waajib in aad sidoo kalena iska casisho kursigaaga barlamaanka,” ayuu yiri Odinga Khamiistii (3-da May).
Odinga waxa uu sheegay in ODM uu sii wadi doono dadaalka uu ugu jiro in isbaddal lagu sameeyo dastuurka kaasoo oggolaan doona in la furo tartanka mansabka madaxweynenimo, hase yeeshee Mudavadi waxa uu sheegay in xisbigu uunan si dhab ah uga shaqayn isbaddalkaas.
“Waxan ku kalsoonahay in doorashooyinka soo socda, ay dadka Kenya ay isbaddal iyo dib-u-habeeyn ka door-bidi doonaan xaaladda hadda taagan,” ayuu yiri Odinga. “Waxa aannu dooran doonnaa rajada iyo midnimada oo aan ka door-bidi doonnaa cabsi-galinta iyo kala-qaybinta.”
Mudavadi ayaa Arbacadii iska casilay xilkiisii wasiirnimo iyo kii ku-xigeenka xisbiga ODM kadib markii uu ku shaaciyay in uu yahay musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga UDF.
May 4, 2012 @ 08:04:30AM
Mudavadi ugu dambayntii siyaasiyan waa uu is dilay.
May 4, 2012 @ 01:28:01AM
Waxaan ahay qof Kenyan u dhashay una baahan is badal. Madaxdeena in nagu filan waan ka soo baranay. Waa xilligii aan raadin lahayn is baddal dhab ah gaar ahaan taabo-galinta dastuurka cusub. Sheegashada Mudavadi ee ah in ODM ayan dimuqraadiyad ka dhex jirin maaha arrin dhab ah. Waxay ku marin-habaabiyeen mucaaradku inuu ka baxo ODM si markaa xisbiga loo wiiqo oo ay uga adkaadana kuwa mucaaradku. Qofka kaliya ee ay ka dhabtahay in isbaddal la sameeyo waa Mudane Raila Odinga.